Hotel Minibar Factory, mpamatsy - China Hotel Minibar Manufacturer
Fanamainana volo mitaingina rindrina RCY-67588B / D158 / RCY-568
Masinina kafe kapsily kely ST-511
0.6L Capsule masinina kafe azo esorina AC-514K
0.8L Capsule masinina kafe azo esorina AC-513K
Sehatra elektronika vera vita amin'ny CW280
Miorina amin'ny lanjan'ny vera CW269
BLDC Motor fanamainana volo RM-DF06
Fanamainana volo haingam-pandeha RM-DF11
Kettle Electric Electric kettle XT-9S
Ketera elektrika anti-scalding Double-layer LL-8860/8865
Hitroka hotely Minibar M-25C / M-30C
Ny bar Mini mihazakazaka mihazakazaka dia tsy hisy fiantraikany amin'ny torimasonao ary tsy mila miala eo am-pandriana na fandriana fotsiny ianao vao hahatratra sakafo na zava-pisotro. mitazona ny sakafo sy zava-pisotro ho madio sy mangatsiaka tsy mila mampiasa vata fampangatsiahana varotra. Noho ny lanjany maivana dia azo afindra amin'ny faritra hafa amin'izay ilana zava-pisotro mangatsiaka na dia ny Garden. Ny varavarana Crystal Clear an'ny bara kely dia ahafahanao mahita foana ny tahirinao amin'ireo zavatra tsara.
Hitroka hotely varavarana hotely Minibar M-25T
Ny kalitao, ny vidiny, ny famolavolana ary ny fiarovana no teny fototra ao amin'ny Absorption Minibar M-25T
Heverina ho mahasoa toy ny vata fampangatsiahana kely, ny baritra kely dia manamora ny fitehirizana vokatra sy zava-pisotro mangatsiatsiaka.
Ireo boaty mini vata fampangatsiahana dia napetraka ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na birao.
Hitroka hotely Minibar M-25A
Ny mpitroka Minibar dia misy amin'ny sehatra samihafa mba hifanaraka amin'ny fittings an'ny kabinetra. Tonga feno miaraka amin'ny jiro anatiny LED ary koa hidin-trano tsara kalitao. Namboarina sy namboarina haharitra izy ireo. Ny fividianana Absorption Minibar M-25A dia fampiasam-bola maharitra amin'ny kalitao. Ny tsirairay dia natsangana haharitra amin'ny fampiasana azy isan'andro, ary haharitra ny ain'ny fametrahana.
Hitroka hotely Minibar M-30A
Ny habeany kely kokoa dia mamela azy ireo apetraka saika hatraiza hatraiza, anisan'izany ny latabatra misy na eo ambaniny.
Tonga lafatra ho an'ny fridges ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, mitombo ny lazan'ny bara madinidinika miaraka amin'ireo safidy ao anatin'izany ny "No Noise" ary vaovao amin'ny tsena, ny teknolojia fantsom-panafana.
Hitroka hotely Minibar M-40A
Ny absorption Minibar M-40A dia manome hafanana mangatsiaka mahatratra 5 ° C ka hatramin'ny 8 ° C. Mety amin'ny fitehirizana zava-pisotro sy tsakitsaky, ity vata fampangatsiahana kely 40 litatra ity dia mihazakazaka mangina tanteraka
Taratasy fanamarihana: CE / RoHS
Ny fandraisam-bahiny amin'ny hotely sy trano fampiasana Minibar M-50A